Amakhadi Ebhizinisi angama-50,000,000! | Martech Zone
Amakhadi Ebhizinisi angama-50,000,000 XNUMX XNUMX!
NgoMsombuluko, Okthoba 19, 2009 NgoLwesine, Februwari 25, 2021 Douglas Karr
Uma ungakaze ube nethuba lokuhlola ama-minicards adumile kaMoo, ayindlela enhle! UCasey kusuka MooshinIndy.com bekune-set ephrintiwe nezithombe zakhe ezinhle futhi bezimangalisa.
Zenziwe ngesitoko esihle futhi ziyabamba iso lakho. Eqinisweni, bathengisile amakhadi ebhizinisi angaphezu kwezigidi ezingama-50 avela eMoo futhi awahambisa emazweni angaphezu kwe-150!
Moo manje ungeza ezinye izinketho:
Ukulayishwa kwezinhlangothi ezimbili - faka kalula ukufaka uphawu kophawu lwenkampani, ama-logo, nemiklamo kokubili ngaphambili nangemuva kwama-MiniCards, ukwandisa amathuba okuthi lo mkhiqizo ungasetshenziselwa ini. Isibonelo, iPerch, inkampani yokuphathwa kokuqukethwe online, iphrinte ikhodi yokuphromotha eyingqayizivele ku-MiniCards yayo ngayinye, ibenza ithuluzi lokumaketha elinamandla, nelilandelekayo.
Izinketho zesakhiwo esisha - Ama-templates, amafonti, nemibala engeziwe kunika amakhasimende izinketho eziningi ngokwakhiwa kwamakhadi awo, kuthatha ukwenziwa komuntu siqu kwe-MOO kuye ezingeni elisha.
Inani lesaphulelo - Ngephakethe elisha le-400, amabhizinisi amancane angathenga ngevolumu enkulu ukuhlangabezana nezidingo zawo zenethiwekhi futhi athole isaphulelo senqwaba.
Ngikukholwa ngokuqinile lokho amakhadi ebhizinisi akumele nje achithwe kumklamo oshibhile lokho kujikijelwa ngokushesha ngokushesha lapho ubuyela ehhovisi bese ufaka imininingwane LinkedIn. Sebenzisa ngokunenzuzo njalo lapho udlulisa ikhadi kulokho okulandelayo ukuze wenze okuhlukile. Amakhadi Ebhizinisi E-MOO - $ 21.99 yamakhadi amaBhizinisi ahlukile angama-50, ngalinye linomklamo ohlukile.
Amakhadi ebhizinisi engisanda kuwathenga enze ukubabazeka okukhulu - ngithola ukuphawula njalo lapho ngiwahambisa. Ngaphezu kwakho konke, noma kunjalo, ngithola izimpendulo!
Tags: imibono yekhadi lebhizinisiamakhadi ebhizinisimooamakhadi we-moo
I-Alterian Isungula Umkhandlu Wezokumaketha Komphakathi
Izinhlobo Ezinkulu Ziguqukela Ngokuhamba Kwesikhathi